मेघा घिमिरे बहिनीका टिकटक भिडियो नेपालमा सबै भन्दा बढी भाइरल छन।। हेर्नुहोस उनका चर्चित भिडियो हरु।। - Onlines Time
July 29, 2021 July 29, 2021 onlinestimeLeaveaComment on मेघा घिमिरे बहिनीका टिकटक भिडियो नेपालमा सबै भन्दा बढी भाइरल छन।। हेर्नुहोस उनका चर्चित भिडियो हरु।।
मेघा घिमिरे अहिले टिकटकमा सबै भन्दा बढी लाइक पाउने नेपाली चेलीको रुपमा परिचित छिन उनका भिडियो सबै भाइरल भइरहेका छन।। दु´र्घ´टना मा परि दुबै हात गु´माएकि मेघालाई श्रीमानले छोडेर एक्लै जीवन चलाउदै आएकी छिन।
त्यहि सामाजिक संजाल टिकटकमा अहिले मेघा घिमिरे जो आफ्नो नृत्य(डान्स) सधैजसो देखाउनुहुन्छ ।टिकटक प्रयोगकर्ताले उहालाई नचिन्ने सायदै कोहि होलान ।उहाको मनमोहक नृत्यको हामी सबै फ्यान हौ ।
उहा बिराटनगर बाट हुनुहुन्छ र हाल काठमाडौंमा बस्दै आउनुभएको छ ।उहाका दुबै हात छैनन् तर हात छैनन् भन्दै रोएर र आफ्नो जिवनबाट हरेस खाएर बस्नुभन्दा उहाले जीवन जिउने तिर खुसि खोज्न तिर आफ्नो जीवन बेथित गर्नुभयो ।
आहा ! बाहुन क्षेत्रिले नै बनाए सार्किको छोरिलाई यसरी पुजारी (हेर्नुस् भिडियो )
भाइ*रल सुजन गुरुङ दोहोरी गाउन पनि खप्पिस हुमा संग पर्‍यो खत्रा दो’होरी (भिडियो हेर्नुहोस्)
हैट ! खोला आएपछि बेहुलाले यसरी बेहुलिलाई बोकेर हिडे (हेर्नुस् भिडियो )